Tooth Care – Healthy Life Journal
All posts tagged "Tooth Care"
———၊ သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ၊——— Q. ခံတွင်းသန့်စင်နည်း အမျိုးမျိုးအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ A. ခံတွင်းသန့်စင်နည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရှေးကတည်းက ခံတွင်းကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သန့်စင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆားနဲ့လက်နဲ့ သွားတိုက်တာ၊ ရေနွေးကြမ်းထဲ ဆားထည့်ပြီး ပလုတ်ကျင်းတာ၊ ဆားရေငုံတာ၊...
———၊ လရိပ်မေ ၊——— အိပ်ရာမဝင်ခင် သွားတိုက်ဖို့၊ သန့်ရှင်းတဲ့သွားတွေနဲ့သာ အိပ်စက်အနားယူဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်တာမျိုး လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ စာဖတ်ရင်း၊ တီဗီကြည့်ရင်း အိပ်ချင်စိတ်များလာလို့ သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာထဲဝင်အိပ်တာ၊ အိပ်ခါနီး သွားတိုက်ပြီးမှ သရေစာစားမိတာတွေကြောင့် မသန့်ရှင်းတဲ့...
အားဖြည့်အချိုရည် အသောက်များပြီး သွားအားလုံးနီးပါး ပျက်စီးသွားသူ
—————၊ ကိုထက် ၊—————- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသူ အသက်၂၁ နှစ်အရွယ် ဗင်းနိုင်းဟာ အမြဲနိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်နေဖို့အတွက် ကဖင်းဓာတ်နဲ့ သကြားတွေအများအပြား ပါဝင်တဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်ကို သောက်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗင်းနိုင်းဟာ ကျောင်းတက်ပြီး ဒုတိယနှစ်မှစပြီး နေ့ရောညပါ နိုးကြားနေစေဖို့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေကို ပိုပိုပြီး...
ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ရန် နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်သည့် နည်းလမ်းကောင်း ၁၀
—–၊ မီမိုးမေ(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—– ခံတွင်းကင်ဆာဟာ အဖြစ်များလာသလို နေ့စဉ် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နှုန်းပိုများစေတဲ့အတွက် ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) ဆေးရွက်ကြီးဝါးစားတာကို ရှောင်ပါ။ (၂) ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ စီးကရက်၊ ဆေးပေါလိပ် အစရှိတဲ့...
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အပြုံးလှလှပြုံးနိုင်စေမည့် နည်းလမ်း ၇ ရပ်
အပြုံးလှလှပြုံးနိုင်ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ ခံတွင်းထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းတွေကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ (၁) လျှာကိုသန့်စင်ပါ တစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ် သွားတိုက်တာနဲ့ သွားကြားပွတ်ကြိုးထိုးပေးတာအပြင် လျှာခြစ်တံနဲ့ လျှာကိုပါ သန့်စင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ လျှာရဲ့အနောက်ဘက်အပိုင်းမှာ အနံ့ဆိုးထွက်တာက ခံတွင်းအနံ့နံတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လျှာမှာ စားကြွင်းစားကျန်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို...
သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး အသက်ကြီးသူတွေကို သွားနဲ့ခံတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာရာမှာ အုပ်စုသုံးစုခွဲပြီး လေ့လာပါတယ်။ ပထမအုပ်စုက သွားအပြည့်ရှိတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပြီး သွားကောင်း ၃၂ ချောင်းစလုံး ရှိနေတဲ့အုပ်စုပါ။ ဒုတိယအုပ်စုက သွားတွေရှိနေပေမယ့် သွားအရေအတွက် ၃၂ ချောင်းထက် လျော့သွားတဲ့အုပ်စုပါ။ ဒါကို Partial...
ရောဂါတာရှည်ခံစားနေရသူများ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကင်းဝေးစေရန်
—–၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ၊——- Q. နာတာရှည်လူနာတွေအနေနဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်းမှာ ဘယ်လိုပြဿနာတွေ အဖြစ်များပါသလဲဆရာ။ A. သွားနဲ့ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးအတွက် ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်နိုင်တာကြောင့် သွားတွေကြားထဲ စားကြွင်းစားကျန်တွေ ကပ်ညိနေတာ၊ သွားအခေါင်းပေါက်တွေ ဖြစ်နေတာ၊ သွားပေါက်တွေထဲမှာ အစာတွေဝင်တာ၊ သွားပိုးစားတာတွေ...
သွားနှင့်ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး Q. သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ သွားရောဂါတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ လူငယ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သွားပိုးစားရောဂါတွေက တော်တော်အဖြစ်နည်းသွားပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေက ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါ (Chronic Periodontitis) နဲ့ သွားဖုံးရောဂါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။...